Kuqwashiswe abantu ngesifo somdlavuza | News24
Kuqwashiswe abantu ngesifo somdlavuza
PHOTO: lethiwe makhanyaUNgqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDkt Aaron Motsoaledi.
UNGQONGQOSHE wezeMpilo kuzwelonke uDkt Aaron Motsoaledi usenxuse abantu ukuba bahlolele isifo somdlavuza kusanesikhathi ukugwema izinkinga uma ngabe sesitholakala sekwedlule isikhathi .
UDkt ubekhuluma emcimbini wokwethula umkhankaso kazwelonke wokuqwashisa ngalesi sifo nobubanjelwe ezinkundleni zemidlalo eCaluza ngoLwesibili mhla zingama-30 kuMfumfu(October).
Inhloso yalo mkhankaso kungukufundisa abantu ngezinhlobo ezahlukene zesifo somdlavuza kanye nokuqwashisa ngawo ukuthi umphakathi ungawuvikela kanjani.
Uveze ukuthi lesi sifo siyinkinga umhlaba wonke ayi nje ezweni laseNingizimu Afrika kuphela.
“Umdlavuza akusona isifo esifika manje kade saba khona sidala ngisho okudlula isifo sesandulela ngculaza kodwa umheluko manje ukuthi lesi sifo somdlavuza sisabalala njengomlilo wequbula. Ziningi ke izinto ezibanga umdlavuza okubalwa khona indlela ophila ngayo, ukubhema ugwayo okanye ukuhlala eduze kwabantu ababhemayo, ukungazivocavoci kanye nokuphuza utshwala,” kubeka yena.
Ube eseyala amalunga omphakathi ukuba enze isiqiniseko sokuthi njalo ahleli eyohlolela umdlavuza ikakhulukazi labo abanamalunga emindeni okanye izihlobo ezake zaba nawo umdlavuza.
“Uma kungukuthi kuthi kini kukhona umuntu owake waba nomdlavuza nawe usemathubeni okuthi kungenzeka ube nawo. Kubalulekile ukuthi sihambeni sonke siyohlola ukuze sizosibamba lesi sifo kusanesikhathi. Singuhulumeni senza konke okusemandleni ukuba sizame ukunqanda umdlavuza.
Uphinde waveza ukuthi kunemibiko eveza ukuthi kuzophela lo nyaka sekunabantu abangu-107 000 okuzophela unyaka sebenesifo somdlavuza eNingizimu Afrika. Kulabo bantu abangu 59 000 abantu besifazane kanti abangu-47 000 abantu besislisa.
UMnuz Xolani Gwala oyinxusa lomdlavuza naye unxuse umphakathi ukuba ungahlali isikhathi eside ungazazi ukuthi umephi ngesimo sawo .
“Ngonyaka owedlule ngenyanga kaMandulo (September) ngaphathwa umkhuhlane nongathi uma ngiya kadokotela ngathola ukuthi nginesifo somdlavuza esesiku-stage-4 lapho sekwembulwa kwembeswa khona. Kusukela ngenyaka kaMandulo sengihlinzwe kahlanu nami futhi angazi ukuthi ngaphunyula kanjani. Akukho mnandi ukuzithola usesimweni esifana nesami.
“Ukube nami ngasheshe ngahlola ngazazi angabe angigcina sengihlinzwa kangaka . Angifuni ukuthi omunye umuntu agcine esezithola ekulesi simo engangikusona mina ingako nginigqugquzela ukuba nihambe niyohlola ukuze nizothola ukwelashwa kusanesikhathi . Abaningi ababesimweni sami abasekho badlula emhlabeni ngoba kwase kukubi kakhulu,” kubeka yena.